GEFKA GOODAX IYO GARNAQSIGA PUNTLAND – Ministry of Education in Puntland
(GEED SARE WAABOW GUNTAA KA ROON)
Puntland waxaa ka jiray 4 dugsi sare dagaalkii sokeeye ka hor; dugsiga saree Cumar Samatar (Gaalkacyo), dugsiga saree Gambool (Garoowe), dugsiga saree Sh. Cusmaan (Qardho) iyo dugsiga saree Bosaaso (Bosaaso). Dugsiyadaas sare waxaa dib boorka looga jafay 1999 iyada oo Wasaaradda Waxbarashadu kaashanaysa hay’adda CfBT
(Center for British Teachers) oo shaqo dhaxalgal ah ka qabatay dayactirka dugsiyada, tababarka iyo gunnada barayaasha, ku caawinta agabka waxbarashada, soo bandhigidda iyo fulinta imtixaan casriyeysan oo cid waliba kalsooni ku qabto. Imtixaankii dugsiyada sare ee u horreyey waxa la qabtay 2003dii. Barnaamijkii imtixaan ee quruxda badnaa ee wasaaradda iyo CfBT iska kaashadeen wuu mira dhalay, iyadoo hirgelintiisa iyo horumarintiisa ay ka wada qeyb qaateen wasaarada iyo hay’adaha caawiya. Waxaa si gaar ah in loo xuso ay muhiim tahay hay’adda Africa Educational Trust (AET). Waxaa lama ilaawaan ah aqoonyahanka Dr. Rod Hicks oo CfBT iyo AET labadaba u ahaa laf dhabarta Puntland xagga waxbarashada u qaabilsanaa iyo dadkii la shaqeeyey (Soomaali iyo ajnabiba) Imtixaanka Puntland wuxuu ardayda, waalidka iyo bulshada ka kasbaday tixgelin iyo kalsooni loo hayo bahda waxbarashada. Puntland waxay sameysatay shahaado la aqoonsan yahay oo leh astaamo (features) sare oo aan la been abuuri karin. Imtixaanka iyo shahaada Puntland waxay noqdeen tusaale nool oo horyaal Soomaali oo dhan. Inkasta oo dadaalkaas guuleystay ay tahay in abaal loogu hayo dhammaan inta ka qeybqaadatay, haddana waxa si gaar ah halkaan ugu xusayaa hawl wadeenada Xafiiska Imtixaanka Puntland oo geliyey waqti iyo tamar si xafiisku magacaan u kasbado. Waxaa xafiiska iskaga dambeeyey 5 guddoomiye (inta aan goobjoogga u ahaa):
1.	Axmed Salaad Maxamuud(AUN) , 2003 – 2005
2.	Ismaaciil Ducaale Qambi (AUN), 2005 – 2007
3.	Maxamed jaamac Yuusuf, 2007 – 2009
4.	Axmed Maxamuud Warsame (Saahid), 2009 – 2020
5.	Maxamuud Maxamed Saciid (Caynsane), 2020 – ilaa hadda
Talooyin gaagaaban Ayaan halkaan ugu soo jeedinayaa Puntland & Dawladda Federaalka:
I.	In dooddoodu noqoto in shaahadooda oo juhdi, waqti iyo dhaqaale badani ku baxay loo tasdiiqiyo, oo aysan noqon kuwo raadiya shahaado la siiyo. Xaq bay u leeyihiin:
1.	Oo waa u soo halgameen,
2.	Oo dastuurkaa qaba,
3.	Oo horumarinta iyo tayeynta waxbarashada ayaa ku jirta
4.	Oo waxbarashada hal meel laga maamulo waa la soo tijaabiyey, lagumana guuleysan.
II.	In ay ardaydooda uga turaan in ay ku dhextuuraan imtixaan aan lagu kalsoonaan karin oo mowjado dhex muquuranaya. Tubaha halaq yaalka, Hog laygu qaniinay, ku sii hiradkiisa, ka haari agtiisa, ayaa ka hagaagsan.
III.	In ay u yeeraan oo casumaad sharafeed u fidiyaan xildhibbaanada iyo wasiirada federaalka ugu jira, u sharraxaan qadiyadda min bilow illaa dhammaad. In ay si qurux badan ugu iftiimiyaan taariikhda la soo maray, dhibka jira, waxa loo baahan yahay iyo xalka suurtagalka ah. Xildhibaanadu iyaga oo aan waxa fahamsaneyn baa laga yaaba in ay qaaddo qiiro, ka dib loo tuso in Puntland sed bursi raadinayso oo ay si sahal ah isaga qancaan. Waxa imtixaanka ka horreeya waa inay fahmaan. Imtixaan maamul goboleed qaado ama dugsi qaado ama hay’adi qaaddo inuusan waxba u dhimayn dawladda dhexe ee ay ku xiran tahay sida ay ula shaqeyso, u ilaaliso, ugu qaraynto waa in horta la isla meel dhigaa. Tuducdii Hadraawi ee ahayd “dugsi keliya baa jira, diric keliya baa dhiga” waa in laga baxaa.
IV.	In la yareeyo wasiir Godax in hadalka lagu kululleeyo, in kastoo aniga laftaydu wax tuurtuuray. Haddana waxay ku qurxan tahay si asluub, tixgelin iyo qadarini ku jirto in loo wada hadlo.
a.	In aysan noqon arki-jiray doon. Ubadka iyo dhallinyarada Soomaaliyeed masuuliyad baa ka saaran ee waa in ay ku fekaraan waxa danta u ah, suurtagalka ah, cid walba qancin kara, tartan iyo tayo waxbarasho oo wax ku ool ah keeni kara. Soomaalidu waxa ay tiraahdaa hoggaamiye waxaa u liita ka yiraahda: Arkay oo anaa iska leh, iri oo looma noqdo, aniga wax la iima sheego. Sida ay jecel yihiin in loo dhegeysto, loo ixtiraamo dadka ha u tixgeliyeen, masuuliyaddana ha u ogolaadaan. Rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusin, maso inaannu nahay oo tolnimo meerto noo tahaye
(Saahid Qammaan). Waxbarashada Soomaaliya maanta waa tabar daran tahay, waxayna u baahan tahay siyaasad deggan, qorshe fadhiya, dhiirigelin iyo wada shaqeyn. Dawladda dhexe iyo maamul goboleedyadu waa in ay la yimaadaan xal wax ku ool, waase in marka hore laga helaa dawladda federaalka ah hoggaamin qabow oo leh tartiibin, tixgelin iyo turxaan bixin. Hoggaamiyaha dadnimada iyo isku wadka leh waxaa lagu gartaa adeegsiga hoggaaminta la jaanqaadda xaaladda markaas taagan. Caqliga ah shahaadada haddii aysan Dawladda Federaalku bixin dawladnimaday wiiqamaysa waa arki-jiray doonkii aan soo sheegay. Shahaada dugsiga sare waxaa bixiya dugsiyo, magaalooyin, hay’ado, maamullo iyo dawlado. Aragtida ah in dawladnimo ku daciifayso ku beddel in ay ku xoogsanayso, masuuliyad ku yeelanayso, tayada iyo tartanku ku badanayaan.
b.	In ay si rasmi ah u aqoonsato shahaada Puntland, isla markaas Xafiis Wasaaradda Arrimaha Dibadda ahi ku tasdiiqiyo Garowe. Taasi waxa ay keenaysaa masuuliyadda oo la qeybsado iyo adeegga oo dadka loo fududeeyo. Intaas ka dib waa in maamul goboleed walba iyo gobolka Banaadir la siiyaa waqti go’an oo uu kula wareego imtixaankiisa (tusaale 2 sano). Haddii maamul goboleed kula wareegi waayo imtixaankiisa muddadaas, waa in uu jiraa sharci dawladda dhexe u siinaya awood in ay u maamusho imtixaanka muddo go’an
(tusaale 5ta sanoo soo socota). Haddii arrintaas la sameeyo waa dhiirigelin, waxaana bilaabanaya tartan iyo gobol waliba inuu guntiga dhiisha iska dhigo.
Yeerinta iyo amar siinta waxaa ka fiican in dadka caqligooda iyo aqoontooda la adeegsado, la tartansiiyo, la dhiirigeliyo, dusha laga hago, la kormeero, la qiimeeyo, lana abaal mariyo. Hadda waxaan ku jirnaa tuducdii deeleyda ee ahayd “Dib u soco hore soco, hore iyo dibba u soco, darandoorri saan-qaad maxaa daal la kororsaday”, Yusuf Xaaji Aadan. Ma ka baxnaa iska daba meeraysiga, mise wa isdaboolnaa nin dulmiyan Allaa oge.
c.	In ay kormeer ku sameeyaan habsame u socodka waxbarashada; fulinta siyaasadaha iyo hagayaasha waxbarashada, tababarada, dejinta iyo qaadidda imtixaanda, talo celin joogta ahna la wadaagaan maamulada si loo xoojiyo kobcinta iyo horumarinta waxbarashada, loona daboolo baahiyaha iyo god daloolooyinka jira.
d.	In deeqaha waxbarashada lagu baxsho tirada ardayda, dadaalka iyo waxqabadka sarena loo qoondeeyo abaal marinno dheeraad ah, si tartanka iyo dhiirigelinta loo xoojiyo.
Oday Soomaaliyeed oo dhibka ardayda Puntland haystaa ka damqaday: